Chronic Low Back Pain: Chekutanga New Virtual Reality Treatment
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Chronic Low Back Pain: Chekutanga New Virtual Reality Treatment
AppliedVR, piyona ari kusimudzira chizvarwa chinotevera chekurapa kwekunyudza, nhasi azivisa kuti US Food and Drug Administration (FDA) yakapa mvumo yeNovo yemhando yayo yekurapa inonyudza, EaseVRx, kurapa marwadzo asingaperi emusana, ayo akambowana dhizaini yechishandiso. muna 2020. Nhau dzinouyawo pazvitsitsinho zveAppliedVR ichizivisa yayo $36 miriyoni akatevedzana B mari kutenderera, kuunza mari yayo yose kusvika $71 mamiriyoni.
EaseVRx chigadzirwa-chinoshandiswa chekurapa chine software yakarongedzerwa papuratifomu yehardware inopa kudzidziswa kwekudzora marwadzo kunoenderana nehunyanzvi hwekuzvibata uye dzimwe nzira dzekuzvibata. Inoshandisa inonyudza chaiyo chaiyo (VR) sisitimu inoburitsa VR zvemukati uku ichibatanidza biopsychosocial marwadzo dzidzo, diaphragmatic kufema kudzidziswa, pfungwa dzekurovedza muviri, kuzorora-mhinduro kurovedza uye Executive inoshanda mitambo.
Iyo EaseVRx software yemukati ine mavhiki masere, VR-yakavakirwa chirongwa chinobatsira vanhu kuderedza kusimba kwechiratidzo uye kukanganisa kwemarwadzo avo. Vanhu vane chirwere chisingaperi chisingarware shure vanotevera chirongwa chekiriniki chakasimbiswa, uchapupu-based kuti vakudziridze unyanzvi hwekugadzirisa uye vachigadzira maitiro matsva, anobatsira anogona kuderedza marwadzo ekurwadziwa uye kukanganisa kunorwadza.
"Nhasi kubvumidzwa kweFDA kunocherekedza zuva rakakosha reAppliedVR, yeimmersive therapeutics sector uye, zvakanyanya kukosha, kune avo vanhu vanorwara nemarwadzo emusana," akadaro Matthew Stoudt, co-muvambi uye CEO weAppliedVR. "Kurwadza kusingachinji-mushure kunogona kuita dambudziko rinoremadza uye rinodhura zvakanyanya, asi ikozvino tave nhanho imwe padhuze nekuzadzisa chinangwa chedu chekuita marapirwo anonyudza chiyero chekutarisira marwadzo."
AppliedVR's FDA kutumira kwakatsigirwa nemiedzo miviri yakarongeka (RCTs), kuongorora kushanda kweVR-based program yekuzvirapa kwekurwadziwa kusingaperi kumba. Zvidzidzo zviviri izvi zvakagumisa kuti chirongwa chekuzvimirira, unyanzvi-based VR chirongwa chekurapa chakanga chisiri nzira inogoneka uye inotyisa yekurapa marwadzo asingagumi, yakashandawo pakuvandudza pamigumisiro yakawanda yemarwadzo asingagumi.
Chidzidzo chekutanga, chakabudiswa muJMIR Formative Research, yakaongorora dhiyabhorosi kubva kuvanhu vanotambura nekusingaperi-kumashure-kumashure kana kurwadziwa kwe fibromyalgia pamusoro pemazuva e21. Vatori vechikamu vachishandisa EaseVRx zvakanyanya kuderedza zviratidzo zvishanu zvinorwadza - chimwe nechimwe chakasangana kana kudarika 30-muzana chikumbaridzo chechinangwa chekliniki.
Muchikamu chayo cheRCT inodzidza kuchengetedzwa uye kushanda kweEaseVRx kwemavhiki masere, vatori vechikamu muboka reEaseVRx paavhareji vakashuma kuvandudzwa kwakakura mushure mekurapwa, kusanganisira kuderedzwa kwe42% mukurwadziwa kwakanyanya; 49% kuderedza mukukanganiswa kwebasa; 52% kuderedza mukukanganiswa kwehope; 56% kuderedza kukanganiswa kwemafungiro; uye kuderedzwa kwe57% mukukanganiswa kwekunetseka.
Dhata rekuita uye rekushandisa rakakosha kune vanopa uye vanobhadhara vanofanirwa kuongorora mukana wekuti nhengo / varwere vashandise dhijitari yekurapa - kunyanya pavari kunze kwekiriniki marongero. Muchidzidzo chakakosha, vatori vechikamu veEaseVRx vakaratidza kubatikana kwakanyanya neavhareji yekupedzwa kwezvikamu zve 5.4 pasvondo uye vakaratidza kugutsikana nekushandisa nyore paSystem Usability Scale (kuyera chishandiso chiri nyore kushandisa pane ATM uye epamusoro email masevhisi).
"Takashanda nesimba mumakore mashoma apfuura kuvaka humbowo husingaenzaniswi hwekiriniki hunoratidza simba reVR rekurapa marwadzo, uye hatigone kufara zvakanyanya kuita chiitiko chakakosha ichi," akadaro Josh Sackman, AppliedVR co- muvambi uye mutungamiri. “Asi, basa redu haripere nemvumo imwe chete iyi. Takazvipira kuenderera mberi netsvagiridzo inosimbisa kugona kwedu uye mutengo-kubudirira pakurapa marwadzo asingaperi nezvimwe zviratidzo. "
Kurwadziwa kwepashure ndeimwe yeakajairika mamiriro asingaperi ayo vanhu vanotarisana nawo pasi rese uye anomiririra chimwe chezvikonzero zvepamusoro nei vanhu vachirovha basa. Pamusoro pezvo, idambudziko rinodhura zvakanyanya kune veinishuwarenzi sezvo vazhinji vanotarisa kuderedza mitengo ine chekuita nekuvhiyiwa kumashure. Ongororo ichangobva kuitika yakaratidza kuti, kana yakabatanidzwa nemarwadzo emutsipa, kurwadziwa kwepashure kunodhura madhora 77 bhiriyoni kune inishuwarenzi yega, $ 45 bhiriyoni kune inishuwarenzi yeruzhinji, uye $ 12 bhiriyoni mumari yekubuda muhomwe yevarwere.
Kurwadziwa kusingagumi, zvakanyanya, kunodhura uye kunobatsira kune mamwe matambudziko ehutano, kusanganisira chirwere cheopioid. Imwe yapfuura Johns Hopkins kudzidza muThe Journal of Pain akawana kuti kurwadziwa kusingaperi kunogona kudhura zvakanyanya semadhora mazana matanhatu nemakumi matatu nemashanu pagore - kupfuura mutengo wepagore wegomarara, chirwere chemoyo uye chirwere cheshuga zvakasanganiswa.
"Marwadzo anowanzobatwa nemaitiro akachena ehupenyu ane maitiro anokosha ekurwadziwa akasiyiwa asina kurapwa," akadaro Dr. Beth Darnall, AppliedVR mukuru wezvesayenzi chipangamazano uye Stanford musayendisiti anorwadza. "Tsvakiridzo yedu inoratidza kuti VR inogona kukwirisa inoshanda 'yemunhu-yese' kutarisira kurwadziwa kusingaperi uko vanhu vanogona kushandisa zviri nyore mukunyaradza kwemba yavo. Semutungamiri wechikamu chekurapa anonyudza, AppliedVR ikozvino yave padanho repamusoro kufambisa shanduko yakanangana nekuchengetwa kwemarwadzo. "
Zvichitevera kubvumidzwa kwayo kwekutanga kweFDA, AppliedVR inoronga kuenderera mberi nekuyedza kuratidza kugona kwekiriniki uye mutengo-unoshanda wekushandisa VR kurapa marwadzo, zvakanyanya kupedzisa akawanda ehutano ehupfumi uye zvakabuda zvidzidzo (HEOR) nevabhadhari vekutengesa. AppliedVR zvakare parizvino iri kushanda pamwe neGeisinger neCleveland Clinic kufambisira mberi miedzo yekiriniki yakaparadzana neNIDA inoedza VR sechishandiso cheopioid-sparing chekurwadziwa kwakanyanya uye kusingaperi.
AppliedVR yatovimbwa nayo neanodarika mazana maviri emasangano anotungamira ezvehutano pasi rose. Iyo tekinoroji yakashandiswa nevanoda kusvika 200 varwere kusvika parizvino mukugadzirisa marwadzo uye zvirongwa zvehutano.